ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : မီဒီယာ က ဝန်ကြီးဌာန FB၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးခန်း မှူးဇော်+ သောတရှင်များ (BBC)
မီဒီယာ က ဝန်ကြီးဌာန FB၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးခန်း မှူးဇော်+ သောတရှင်များ (BBC)
Kay Te Zat O Vs Mu Zaw by Icecude
ရခိုင်အရေး “ဆွ” ပေးသူတွေထဲ မှူးဇော်တစ်ယောက် မပြေးသော် ကန်ရာရှိပါဝင်နေသည်ဟု ယူဆထားသူတွေအတွက် မှူးဇော်၏ အိုးနင်းခွက်နင်းဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များ...
ကိုkay te zat o ကမေးထားတာကသမ္မတအကြံပေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာတင်ထားသော သတင်းအမှားတွေ အတွက် ဘယ်လို တာဝန်ယူပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုမေးထားတယ် ဒါကို သမ္မတအကြံပေးတစ်ယောက်လုပ်နေတဲ့ မှူးဇော်(ခ) မူးဇော် က မယောင်ရာဆီလူး မဆိုင်တာကိုဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ပြီးဖြေသွားတယ် တော်တော်လေးလဲ အံ့သြမိတယ် ဒါ လားသမ္မတအကြံပေးဆိုတာလားပေါ့ ..ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေလို့ သာတိုင်းပြည်မတိုးတက်တာပဲ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသား အရွယ်တုန်းက ကျောင်းပြေးရင် ကျောင်းအုပ်ကမိဘခေါ်ခိုင်းတယ် အဲအခါကျွန်တော်တို့ က လမ်းထိပ်က ဆိုက်ကားနင်း တဲ့ ဆိုက်ကားစရာကိုအကူညီတောင်းတော့ဆိုက်ကားဆရာကလဲကျောင်းအုပ်နဲ့ လိုက်တွေပြီးနောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်ဖို့ နဲ့ အုပ်ထိန်းတဲ့ သူအနေနဲ့တာဝန်ယူကြောင်းကို ရဲရဲတင်းတင်းပြောခဲ့ တယ် ခုသမ္မတအကြံပေးမှူးဇော်ပြောတာလောက်တော့ အဲဒီဆိုက်ကားစရာတောင် ပြောလို့ ရပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဌာန ဆိုင်ရာတချို့ ခေတ်နဲ့ အညီ ဝက်ဆိုက်တွေ ဖေ့စဘုတ်တွေ ကတဆင့် လူထုနဲ့ ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ ဒီလို လူထုကွန်ယက် Social Media တွေကြောင့် အစိုးရနဲ့ လူထု ဘယ်လောက် ချိတ်ဆက်မိကြပြီလဲ၊ သောတရှင်တို့ရဲ့ အတွေး အမြင် အယူအဆတွေကို နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် လွတ်လပ်အတွေးဆွေးနွေးဖလှယ် အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ သောတရှင်တွေနဲ့အတူ သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှုးဦးဇော်ဌေး နှင့် သောတရှင်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
- သောတရှင်တွေ ကြားမှာ ငြင်းချက်ထုတ်စရာဖြစ်နေတဲ့ သမ္မတရုံးသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်နဲ့ မှူးဇော် FB အတူတူဘဲလား? - မှူးဇော် ရဲ့ FB စာမျက်နှာဟာ သတင်းအမှားတွေကို သွယ်ဝိုက်ပြိးပြန်လည် ချေပနေတာဖြစ်ကြောင်း၊ - တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းအမှားတွေအတွက် ဘယ်သူတာဝန်ခံမှာလဲ? - ဝန်ကြီးဌာန က တာဝန်ရှိသူတွေတင်တဲ့သတင်းတွေကြောင့် ရခိုင်ပြဿနာကို အွန်လိုင်းမှာပြောကြရေးကြတာတွေ အတော်ကို ကြမ်းတမ်းလာကြတယ်။